Ungalawula Kanjani Ikhwalithi Yenkampani Yethu | JIAWEI
Kukhona abakhiqizi bezitshalo abasebenza ngokwengeziwe emakethe.Ngakho-ke, izidingo zekhwalithi eziqinile ziyadingeka ukuvela kwabakhiqizi abaningi. Manje ake wethule ngokulawulwa kwekhwalithi yenkampani yethu:
Okokuqala: Izinto zokwenziwa ezikhethiwe: izinhlayiya zepulasitiki
(1) Zonke izinto zokungenisa ezintsha ze-PE ezingenisiwe ezingama-80% + izinto zokuqala ezibuyiselwe i-10% + izinto zokuqhuma-ubufakazi bokuthi u-10% zisetshenziselwe ukuguqulwa kwe-granulation ukwandisa ukushesha kombala, ukuqina nokuvikela ukuqhekeka.
(2) Izinto ezingavuthiwe zemikhiqizo ye-PEVA ziqinisekisa i-EVA50% ne-PE50%, ukuqinisekisa ukuthambileka nokulinganisa kwamaqabunga, futhi ubukhulu bawo budlula i-10% lemikhiqizo ejwayelekile emakethe ukuqinisekisa ukuzizwa.
(3) I-paste enamanzi asuselwa emvelweni isetshenziselwa inqubo yokuphrinta amaqabunga, futhi umbala ongenisiwe usetshenziselwa umbala ukuqinisekisa izinga eliphezulu lokulingiswa kombala futhi akukho ukushintshwa kombala.
(4) A + C qinisa ibhokisi elijwayelekile lokuhweba langaphandle elisetshenziselwa ukufakwa kwamabhokisi.
(5) Izinto zokwenziwa zokhuni zangempela ezifana nezigxobo zokhuni nezigxobo zoqalo zonke zenziwe ngokhuni lukhuni nezinsimbi zenyama, zathengwa futhi zabekwa ngaphambi kwesikhathi, zome ngokwemvelo izinyanga eziyi-3-6 bese zomiswa ngamazinga okushisa aphakathi ngezinsuku ezingama-7-10. Ngemuva kokuba imbiza isiqediwe, yomisa izinsuku ezingama-5-7 ukuze uqiniseke ukuthi ayiqhekeki, izibungu, isikhutha noma umswakama.
Okwesibili: Imishini emisha: Kuze kube manje, imishini engama-70% ithuthukisiwe.
(6) Amasethi amabili wemishini yokuphrinta esebenza ngokuzenzakalela ukuxazulula kahle izinkinga zokukhiqiza kanye nomehluko wombala.
(7) Isamba esikhulu somjovo wesikulufa sisetshenziselwa isikhundla sethambo leziqu namaqabunga ukuqinisekisa ukuthi iziqu namaqabunga awahlukanisiwe futhi ephukile.
(8) Inkampani yatshala imali ecishe ibeyi-500,000 ukusungula umshini wokuphelisa igesi ukuqiniseka ukuthi inqubo yonke yokukhiqiza ihambisana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo kuzwelonke.
Okwesithathu. Inqubo yokukhiqiza:
(9) Ama-80% abasebenzi abasebenza phambili abasebenza ngaphezulu kweminyaka emithathu. Ubungcweti kanye nobuchwepheshe babasebenzi bakudala kuqinisekisa ukuthi imikhiqizo iqinisekisiwe kusukela ekuqaleni kokukhiqizwa.
(10) Inkinga yokwakheka kwezitshalo, amakhasimende amaningi acabanga ukuthi izimpahla azilungile, ngoba umuthi awubunjiwe ngokwenziwe ngemuva kokuphothula kwenqubo. Imikhiqizo yangempela yochungechunge lwe-bamboo pole nemikhiqizo yangempela yezinkuni, sifaka amaqabunga esihlahleni ngemuva kokutshala izimbiza esizigcina imikhiqizo igcwele futhi mihle. Asikho isidingo sokuthi amakhasimende avule kabusha ukwakheka kwamaqabunga, ukugwema izikhalazo zamakhasimende ezingabukeki kahle ngesikhathi senqubo yokuthengisa.
Isikhathi sokuthumela: Meyi-29-2020